Home / Faucets kichin / Ikpo ihe eji eme kichin / WOWOW Wall Mounted Pot Filer In Brush Nickel
N'ihi ụkpụrụ ergonomic ya, ite n'ígwé mgbidi na-adịghị mma igwe anaghị arụ ọrụ iji.
Ngwongwo igwe anaghị agba nchara na-eme ka ọ dịgide adịgide.
Ngwaahịa a na-enye onye siri nri ihe nkwado a pụrụ ịdabere na ya.
Ntụziaka nwụnye 2311300
Ezigbo mmanụ a na-eji nzere nickel na-acha uhie uhie bụ 2311300
Na-achọ ụfọdụ njirimara pụrụ iche na kichin ọhụrụ gị iji mee ka kichin gị rụọ ọrụ ma dị mma n'otu oge? Mgbe ahụ, a brushed nickel ite filler faucet nwere ike ịbụ ihe maka gị. Ọ na - esiri gị ike iburu nnukwu ite mmiri site na ebe a na-esi nri gị na stovu gị? Mgbakasị ahụ bụ nke gara aga site na mmanụ ọla a na-acha ọcha na nickel potler nke mmiri WOWOW. A na-ejikarị nsị ite na-eme nri n'azụ kichin gị iji nwee njikọ mmiri n'akụkụ ebe ị na-esi nri. Nke a dị mma karịsịa mgbe ị ga-eji mmiri jupụta nnukwu ite n'ite. Don'tkwesighi ịkwaga ite ọzọ nke nwere ike ịdị mfe nke ibu ọtụtụ ounces. Karịsịa mgbe ị na-achọghị inye gị ogwe aka ma ọ bụ nkwojiaka, nke a nwere ike ịbụ ezigbo aka edozi maka nkasi obi kichin gị.
Mmetụta ọzọ na-enye obi ụtọ nke mmanụ gbamgbam nickel pot filler faucet nke WOWOW bụ eziokwu na ị nwere ike ihicha stovu kichin gị mfe, ebe ị nwere njikọ mmiri dị nso. Nhicha dị nfe ka nnukwu ite nhicha ahụ. A na-eji mmiri nhicha mmanụ nickel potrus nke WOWOW nwere valvụ abụọ seramiiki iji mee ka ahụmịhe na-enweghị mgbapụta. Ọ bụrụ na otu n'ime valvụ ahụ ga-emeghe, nke a agaghị eweta mmiri ọ bụla. Ọ bụ ya mere ọ dị mma oge iji gbanyụọ ma ọlị ka ijide n'aka na ebe a na-esi na kichin gị niile na-ehicha oge niile. Ga-adị mma karịa nwute!
Ezigbo mmanụ nhicha mmanụ nhicha nhicha ọgbara ọhụrụ
Ngwa mmiri a na-acha ọcha na-acha mmanụ nickel nke WOWOW nwere echiche ọhụụ. N'ezie ọ na-enye kichin gị ihe mmetụ pụrụ iche, nke na-enweghị atụ. Ebe ọ bụ na a naghị amakarị ite mmiri, ọtụtụ mmadụ ga-ajụ gị banyere nke a ma ha hụ kichin gị. Obere mgbakwunye okwu na kichin bụ isi mmiri. Nke a pụtara na a na-adọta uche ndị mmadụ ebutere na ntanetị ndị a na-esi nri kichin mgbe ha lere kichin gị. Igwe eji esiji a na-eji acho acho a na-eji acho acho acho adaba n’ime kichin ọ bụla.
WOWOW's bagel bag filler faucet nwere ike ịjikọ ya na nsị kichin ndị ọzọ nke oge a iji mepụta otu nkwekọ na kichin gị. Akara ahịrị ndị edobere ọnụ na akụkụ gbara okirikiri na-abụ ihe nkiri na-atọ ụtọ. A na-ahụ maka ndị na-emepụta WOWOW n'ụwa niile dị ka ndị na -eme ihe ngosi kachasị dị oke mma nke enwere ike bipụta ya n'akwụkwọ akụkọ ọ bụla dị elu gbasara ụlọ kichin okomoko.
Ruo brushed nickel ite nchekwa mmiri faucet
Ihe dị n’ite na-eju eju n’ite bụ na ị ga-akwụli ya n’elu mgbidi n’akụkụ ebe ị na-edebe ite. Ọ nwere ike ịchekwa ya n ’mgbidi ahụ nke ọma n’ihi nkwonkwo ụkwụ na-emegharị ụkwụ. N'ụzọ dị otu a, ọ naghị enye gị ohere isi nri ebe ọ na - ekpocha ebe a na - esi nri. Ma ị ga - enwe ọmarịcha ihe dị ka sentimita iri abụọ na anọ ka ị nwee ike jupụta ite ọ bụla na olulu ọ bụla. Enwere ike ịgbatị favuet ite ngwa ngwa mgbe ịchọrọ ya, ị na-eweghachi ya ozugbo ịmechara. Mgbe ị rụnyere ngwa ndọkpụ nickel a na-egbu egbu, ị ga-akwa ụta na i tinyebeghị ụdị ngwa a tupu oge a.
Mmiri na-agakwa nke ọma na ndị nwere ogo Neoperl ABS dị elu. Ọ na - enye gị ahụmịhe nke na - egbochi mmiri na - enweghị mmiri. Jiri ikike mmiri zuru ezu jupụta ite gị na ebe ị na-esi nri, ọ gaghị eme ka mmiri gbawaa. Lashfesa mmiri nwere ike ibute ọnọdụ ndị dị ize ndụ, karịchaa mgbe ị na-esi nri n’olulu ndị ọzọ na-esi n’ime ite ekwu ekwu. Ebe ị na-esi esi nri na-echekwa oge niile, ịnwere ike iji ya mgbe ọgbụgba ọkụ na-agbanye, na-enweghị nsogbu ọ bụla na kichin gị.
Ogo mmanụ nhicha mmiri nickel potler mmiri mmiri
A na-eji akwa seramiiki mee ihe mkpuchi abụọ nke ikuku a na-eji nickel. Chọpụta na valves anaghị ebute nkwụghachi azụ ma ọlị esemokwu. N'ihi nke a na-enyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma. Ọbụlagodi mgbe ị nwere nkwonkwo na-emebi emebi, a ga-ejikwa mmanụ nickel pot filler fofon a rụọ ọrụ ngwa ngwa. N'ihi ụkpụrụ ergonomic ya, mgbidi ite nke igwe anaghị agba nchara dị mma iji ya. Ogwe aka abụọ na-agagharị agagharị na ogo 360 dị mma iji rụọ ọrụ.
Ihe eji eme ya nke nwere oke ihe eji eme otutu ihe neme ka onu ihe eji eme otutu ihe. Ihe a na-acha nchara nchara a na-acha uhie uhie a na-ehicha mmiri bụ ma ihe nhicha ma ọnụnọ na-ere ọkụ. A na-eji ọla nchara siri ike mee njikọta nke na-ekwe nkwa ịdị mma nke mmiri na-enweghị mmiri ọ bụla. Zọ kachasị mma maka ahụike gị na ezinụlọ gị. N'ihi njiri mara, a na-ejikarị sọlfọ a na-acha mmanụ mmiri a na-egbu egbu dị ka ebe a na-ere ahịa dị ka ụlọ oriri.
Akwụkwọ ikike nchekwa mmanụ nchekwa mmanụ nickel potler faucet
Igwe mmịpụta nhicha ahụ na-enye mmachi ikuku na-abịa na ngwa echichi zuru ezu. Site na ngwa echichi a, ị nwere ike ịwụnye batrị nickel pot filler nke gbara mmiri nke ọma n'enweghị nsogbu ọ bụla. Nke a ga - azọpụta gị ụgwọ plọp dị ọnụ. Ngwunye nwụnye ya na ihe niile ịchọrọ iji kegide faịlị ite na-etinye mgbidi. Gụnyere eriri ọkpọ Allen, teflon teepu, na oghere ntinye aka ka ọ ghara imebi aka gị na ime ka ha dị ọcha na nrụnye. Anyị na-ekwe gị nkwa na ịnwere ike itinye igwe mmachi ite a na-acha nchara nchara n'ime ọkara awa. N'ezie naanị na ọnọdụ ị nwere isi mmiri na ebe kwesịrị ekwesị.
Dị ka WOWOW kwenyesiri ike na ịdị mma nke mmanụ fịọkụ nickel potler faucet, ọ na-enye gị oge ikike afọ 5 maka afọ ojuju. Dịka WOWOW na-enye uru kachasị mma maka ego ị nwere ike ịchọta, ọ na-enyekwa gị nkwa 90 ụbọchị ego azụ. Yabụ na ị nweghị ihe ize ndụ ọ bụla. Ọ bụrụ n ’ị ga - ekwenyeghi na mgbanye mmanụ achiri nickel pot filler, ị ga-enweta nkwụghachi zuru ezu. WOWOW guzo maka ngwaahịa ya na ị nwere ike ịchọpụta ozugbo. Uru nke brushed nickel ite dị omimi faucet na a nutshell:
• Ọ na-enye kichin ọ bụla
• ite ihe eji eme ogbara ohuru
• nkwonkwo na valvụ dị mma
• nwere oke nchekwa iji
• nchara nickel rụchara
• Mfe ịwụnye n’ime nkeji iri atọ
• akwụkwọ ikike afọ 5
SKU: 2311300 Categories: Faucets kichin, Ikpo ihe eji eme kichin Tags: Nickel azọrọ, Ọkpụ ite, Nwa nwoke na-alụbeghị di